महामारीकै बीचमा सम्भव होला नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक ? – bampijhyala.com
Home > समाचार > राजनिती > महामारीकै बीचमा सम्भव होला नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक ?
३ कार्तिक २०७७, सोमबार २०:०१ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को यही कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । नेकपाले बैठक आयोजना गर्दा अहिले कोभिड –१९ बाट दैनिक दुई हजार मानिस काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमित छन् । यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय कमिटी बैठक होला त ?
सदरमुकाम चरिकोटकु मेवु सुपर मार्केट
सञ्चार गृह ३ कार्तिक २०७७, सोमबार २०:०१
स्थानीय तहको अन्तिम बजेट आज आउँदै ३ कार्तिक २०७७, सोमबार २०:०१
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने ३ कार्तिक २०७७, सोमबार २०:०१
हजुरको आजको दिन, आज – १० आषाढ २०७८ बिहिवार को राशिफल ३ कार्तिक २०७७, सोमबार २०:०१
फेरी बढ्यो पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य ३ कार्तिक २०७७, सोमबार २०:०१